မတ်လ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင်ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # နဂါးနှစ် လာပြီ
# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် »
တနင်္လာသားသမီးများ ယခုတွင် ငွေစုငွေပုံ ကိန်း ရှိသော်လည်း အလွန်ပင်ပန်းပြီးမှ ရတဲ့ငွေမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ သို့မဟုတ်ရင် အရှုတ် အရှင်းမကင်းတဲ့ ငွေမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယခုလမှာ သူများ ခေတ္တ အပ်နှံထားတဲ့ ငွေနဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်များကို လက်မခံမိပါ စေနဲ့။ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ လိုက်လာတတ်တယ်။ တရားသဖြင့် ကာယဉာဏအား စိုက်ထုတ်ပြီး ရတဲ့ငွေ မျိုးဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါ။ ဒီလထဲမှာ အချို့ သက္ခတ်ကောင်းထဲမှာ ၀င်ရောက်နေသူများ ငွေကြေးမြောက်များစွာ ၀င်နိုင်တယ်။ စပ်တူလုပ်ငန်းများမှ ငွေဝင်ကိန်း ရှိတယ်။ အချို့သော တနင်္လာသားသမီးများ အိမ်ထောင်ကျကြမယ့် လ,ဖြစ်တယ်။ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေ စွံတတ်တယ်။ ၀န်ထမ်းလုပ်သူများ အထက်လူကြီးရဲ့ ညိုငြင်မှုကို ခံရဖွယ်ရှိတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အထင်လွဲမှု သက်သက်သာဖြစ်တတ်ပြီး နောက်ပိုင်း ပြန်လည်ပြေလည်သွားဖွယ် ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာ တက်ဖွယ်ရှိပြီး မကြာခဏ ကတောက်ကဆဖြစ်ရဖွယ်ရှိတယ်။ ငယ်ရွယ်သူများအတွက် ပညာရေးကံ အနည်းငယ် အားနည်းတတ်တာကြောင့် သတိထားရမယ့် လ,ဖြစ်တယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း အနည်းငယ် ဂရုစိုက်ပါ။ ဒီလထဲမှာ ငွေကြေး စုဆောင်းရရှိဖို့ကံကတော့ အသေအချာရှိနေတဲ့ လ,ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားမည့်သူများ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာနဲ့ ခရီးများကို သွားလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံခြားခရီးထွက်မည့်သူများ ၊ ဘုရားဖူးခရီး / အပန်းဖြေခရီးထွက်မည့်သူများလည်း အထမြောက် အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလအတွက် တနင်္လာသားသမီးများရဲ့ ယေဘူယျ ကံကြမ္မာကတော့ အကောင်းဘက်ကို များပါလိမ့်မယ်။
ယခုလအတွက်- နာမည်မှာ တနင်္လာစ,ပြီး တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ သောကြာ ဆုံးသူများ ကံဇာတာအထူးကောင်းမွန်တိုးတက်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ကြာသပတေး ဆုံးထားသူများ ကံဇာတာ အနည်းငယ်ညံ့ပြီး အထက်လူကြီးများနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပညာရေး သတိထားပါ။
ယတြာပြုလုပ်လိုပါက- ကြောင်တစ်ကောင်ကို ငါးကြော်တစ်ကောင် ကျွေးမွေးပြီး ကုသိုလ်ယူလိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် နွားနို့တစ်ခွက် တိုက်လိုက်ပါ။
ယခုလမှာ အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် အကောင်း နဲ့ အဆိုးတွေ အားပြိုင်နေမယ့် လ,ဖြစ်တယ်။ ယခုလမှာ ထူးထူးခြားခြား ငွေဝင်ကိန်း ရှိနိုင်တယ်။ တစ်ချို့ မျှော်လင့်ထားတာကနေ ၀င်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီး တစ်ချို့ဆိုရင် လုံးဝမျှော်လင့် မထားတဲ့ ကိစ္စတွေကနေ ငွေကြေးဓနဥစ္စာတွေ ၀င်နိုင်တယ်။ ရတနာ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေ ၀င်ကိန်းရှိပြီး ရတနာတူးဖော်ရေး နဲ့ ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်သူများ “ပွပေါက်” ကြီးတွေ(မိမိအတိတ်ကံအလျှောက်) ရရှိနိုင်တယ်။ အချစ်ရေး ကိစ္စတွေမှာ အထူးကံကောင်းနိုင်ပြီး ကာလကြာရှည်စွာ “အဖော်မဲ့နေသူများ” ချစ်သူ ရည်းစားများ ရရှိနိုင်တဲ့ လ,လည်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလဟာ လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်းဖြစ်ရဖို့များတဲ့လ, လည်းဖြစ်တယ်။ စီးပွားရေး နဲ့ လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာ ရန် အတိုက်အခိုက်များစွာ ကြုံရနိုင်တယ်။ ကျန်းမာရေး ရုတ်တရက် ထိခိုက်တတ်တယ်။ သွေးထွက်သံယိုနဲ့ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ အထူးသတိထားပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုများကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ ဒီလထဲမှာ ပျော်စရာ ၊ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ ရက်ပိုင်းတွေကို ဖြတ်သန်းရမှာ ဖြစ်သလို စိတ်ညစ်စရာ ၊ စိတ်ထိခိုက်စရာ ကောင်းတဲ့ ရက်ပိုင်းတွေကိုလည်း ဖြတ်သန်းရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်မျိုးတော့ မရှိနိုင်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် သူများအတွက် ကံဇာတာအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့် ဉာဏ်၊ ၀ီရိယများကိုသာ အစွမ်းကုန်စိုက်ထုတ်ပါ။ စာမေးပွဲကို ဂုဏ်ထူးများစွာနဲ့ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလှူဒါနဖြစ်စေ/၀ိပဿနာ အားထုတ်မှုများ ဖြစ်စေ ဒီလထဲမှာ လုပ်ရဖို့ ရှိပြီး လုပ်ရင်လည်း ကောင်းကျိုး အလွန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရာထူးဂုဏ်ထူးများ ၊ ဘွဲ့များ ရရှိတတ်ပြီး နာမည်နဲ့ လုပ်စားသူများ နာမည်အလွန်ကြီးတတ်တဲ့ လ,လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလအတွက်- နာမည်မှာ အင်္ဂါ စ,ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ ကြာသပတေး ဆုံးထားသူများ အလွန်ကံဇာတာကောင်းနိုင်တယ်။ လုပ်သမျှ ကိုင်သမျှ အောင်မြင်နိုင်တယ်။ တနင်္လာနဲ့ ဆုံးထားသူများ ကျန်းမာရေး ၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုများ သတိထားရမယ် ၊ အတိုက်အခံ အနှောင့်အယှက်ပြုမှု များစွာကြုံရနိုင်တယ်။ အင်္ဂါ စပြီး အင်္ဂါ ပြန်ပိတ်သူများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ယတြာပြုလုပ်လိုပါက - ခွဲစိတ်ကုသဖို့ ငွေကြေးလိုအပ်နေသူ တစ်ဦးကို ငွေကြေးလှူဒါန်းလိုက်ပါ။ အဲဒီလောက် မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင် မိမိမွေးနေ့မှာ ဈေးထဲက “ငါးအရှင် (အနည်းဆုံး၃ကောင်) ကို ၀ယ်ယူပြီး မြစ်ချောင်းများအတွင်း လွှတ်ပေးပြီး အာယုဒါန ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ယခုလမှာ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် နာမည်ကျော်ကြားတတ်တဲ့ လ,ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သမျှတွေ ထွန်းပေါက်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စ,တင်ထားသူများ လုပ်ငန်း တရှိန်ထိုး တိုးတက်မှုကို ရရှိနိုင်တယ်။ ငယ်ရွယ်သူ စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများ စာမေးပွဲများကို လွယ်လင့်တကူ ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သော ဘာသာရပ်များမှာ “လျှမ်းတတ်ပြီး” ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မှားယွင်းဖြေဆိုတတ်ပါတယ်။ နဲနဲ သတိထားရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေးကံ သိပ်အကောင်းကြီးမဆိုနိုင်ပါ။ ၀င်ငွေထက် ထွက်ငွေများနေမယ်။ သို့မဟုတ် ဘာမှ အကျိုးမဖြစ်ထွန်းဘဲ ငွေကြေး အချို့အ၀က် ဆုံးရှုံးရကိန်းလည်း ရှိနေပါတယ်။ မကောင်းသော ကိစ္စများကို လျှို့ဝှက်စွာ လုပ်ကိုင်ထားသူများ မိမိတို့ လျှို့ဝှက်ချက် “ဗူးပေါ်သလို” ပေါ်ပြီး အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်ကိန်း ရှိပါတယ်။ တရားဥပဒေများကို ကျူးလွန်ပြီး ရှောင်တိမ်းနေသူများ ယခုလထဲမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံရဖွယ် ရှိပါတယ်။ တရားဘာဝနာ အားထုတ်လိုစိတ်များ ပေါ်ပေါက်နေတတ်ပြီး ဒီလို လုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း များလည်း ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ယခုလဟာ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ကောင်းတာလုပ်လျှင် ကောင်းကျိုး / မကောင်းတာ လုပ်လျှင် မကောင်းကျိုး များကို “အလွန်သိသာစွာ” ခံစားရမည့် လ, တစ်လဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်း ၊ လ,ပိုင်းများက ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းကျိုး/မကောင်းကျိုး အသီးအပွင့်များကို သိသာထင်ရှားစွာ ခံစား/စံစားရမည့် လ, တစ်လဖြစ်ပါကြောင်း။
ယခုလအတွက်- နာမည်မှာ ဗုဒ္ဓဟူး စ,ပြီး ဗုဒ္ဓဟူး ၊ တနင်္လာ ၊ စနေ ၊ အင်္ဂါ နဲ့ ဆုံးသူများ ကံဇာတာ အထူးတိုးတက ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။ သောကြာနဲ့ ဆုံးထားသူများ မတော်တဆ ထိခိုက်ခြင်း ၊ ဥပေဒနဲ့ ညိစွန်းခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကြာသပတေး ပိတ်ထားသူများ ငွေကြေးဆုံးရှုံးခြင်း ၊ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းခြင်းများဖြစ်နိုင်တယ်။ နေရာထိုင်ခင်း အပြောင်းအလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ယတြာပြုလုပ်လိုပါက - မိမိအ၀တ်အစားများထဲမှာ ဟောင်းနွမ်းနေသော “အ၀ါရောင် (သို့) ခရမ်းရောင်” အ၀တ်အစားတစ်ခုကို “ဖနောင့်ဖြင့် (၇)ချက်ပေါက်ပြီး” အညံ့တွေ ထွက်စေလို့ ပြောပြီး အိမ်ရဲ့ အနောက်မြောက်ဒေါင့် အရပ်မှာ သွားရောက်စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒီအရောင်တွေ မရှိရင် လက်ကိုင်ပုဝါ(အ၀ါ/ခရမ်းရောင်)တစ်ထည်ကို (၃)ရက်လောက် အသုံးပြုပြီး အထက်က နည်းလမ်းအတိုင်း ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် ယခုလဟာ ကံဇာတာ ညံ့ဖျင်းဖွယ်ရှိတဲ့ လ, တစ်လဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျန်းမာရေး အထူးဂရုစိုက် သင့်တယ်။ ၀မ်းဗိုက်ပိုင်းမှာ ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ မိမိနေအိမ်ကို လူအ၀င်အထွက်များပြီး အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ရှတတ်တယ်။ သူခိုးခိုးခံရတတ်တယ်။ လူလိမ်ခံရတတ်တယ်။ “ရွှေ” ၀င်ကိန်းရှိပြီး ၀င်လျှင် မကောင်းပါ။ ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်တယ်။ ငယ်ရွယ်သူများ ပညာရေးကံ အားနည်းနေတယ်။ ခြေချော်လက်ချော် ဖြစ်တတ်တယ်။ မြင်းကောင်းခွာလိပ်ဖြစ်တတ်တယ်။ အထူးသတိထားရမယ်။ ခရီးသွားလာဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ ပျက်ယွင်းတတ်တယ်။ သို့မဟုတ် စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ ခရီးများကို သွားလာရတတ်တယ်။ ဒီလထဲမှာ မကောင်းသော သက္ခတ်များအတွင်း ရောက်နေသူများ ခရီးသွားလာစဉ် အဆင်မပြေမှုများ ၊ ထိခိုက်ရှနာမှုများ ဖြစ်ဖွယ်ရှိလို့ သတိထားပါ။ သားသမီးရှိသူများ သားသမီးအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ ၊ ၀မ်းမြောက်စရာ ကိစ္စများ ကြုံတတ်တယ်။ ကလေး အလွန်လိုချင်နေသူများ ဒီလထဲမှာ ကလေးရတတ်တယ်။ (ကိုယ်ဝန်ရခြင်း /မွေးဖွားခြင်း)။ လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာတော့ တိုးတက်ကောင်းမွန်နေမယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ အခက်အခဲတွေကို မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေက ကူညီဖို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ယခုလမှာ အထူးသတိထားရမှာက မိမိလုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြုတ်နှံခြင်း ၊ အစုစပ်ထည့်ဝင်ခြင်းများကို သတိထားရမယ်။ ဒီလို လုပ်ကိုင်ရင် အဆုံးအရှုံးဖြစ်ဖို့ အလွန်များတတ်တယ်။ ၀န်ထမ်းများအတွက် မိမိအထက်လူကြီး၏ အမြင်စောင်းတာကို ခံရခြင်း ၊ (သို့) မိမိအား စောင့်ရှောက်နေ သည့် အထက်လူကြီး ဒုက္ခတွေ့ခြင်းများ ကြုံရနိုင်တယ်။ မိမိလုပ်ဆောင်ချက်များ မအောင်မမြင် ဖြစ်တတ်တယ်။ အမှုအခင်းများ ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်။ ယေဘူယျပြောရရင် ဒီလထဲမှာ ကြာသပတေး သားသမီးများ ကံဇာတာ အညံ့များနေတယ်။ သတိနဲ့ နေထိုင်ရမယ့် ကာလဖြစ်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ယခုလအတွက်- နာမည်မှာ ကြာသပတေး စ,ပြီး ကြာသပတေး ၊ အင်္ဂါ ၊ သောကြာ နံများနဲ့ ဆုံးထားသူများ ကံဇာတာ အလွန်နိမ့်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့ ဆုံးသူများ ကံဇာတာ အနည်းငယ်ကောင်းမွန်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ ကျန်နေ့နံနဲ့ ဆုံးထားသူများလည်း အနည်းနဲ့ အများ ကံညံ့ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ယတြာပြုလုပ်လိုသူများအတွက် - လမ်းထဲမှာ နံနက်စောစော အလှူခံကြွတဲ့ ရဟန်းသံဃာ(၅)ပါးကို ပေါက်စီ တစ်လုံးစီ အရုဏ်ဆွမ်းအဖြစ် ကပ်လှူလိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် “ပဲပေါင်မုန့်” တစ်လုံးစီ ကပ်လှူလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် နာရေးကူညီမှုအသင်း တစ်ခုခုကို မိမိတတ်နိုင်သလောက် အလှူငွေ လှူဒါန်းလိုက်ပါ။
သောကြာသားသမီးများ ယခုလမှာ ကံဇာတာ သိပ်အကောင်းကြီး ပြောမရပါဘူး။ ငွေကြေးကံ ၊ စီးပွားကံ တစ်ခုတော့ ကောင်းတယ် ပြောနိုင်ပြီး ကျန်ကိစ္စ အတော်များများမှာ ကံမလိုက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အကောင်းအဆိုး ရောနှောနေတဲ့ လ, တစ်လဖြစ်နိုင်တယ်။ အချို့လူများကျတော့ ကောင်းသတင်းနဲ့ထွက်ပြီး အချို့လူများမှာ မကောင်းသတင်းထွက်တတ်ပါတယ်။ (ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်)။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အလုပ်အကိုင် ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုများ ကြုံရမှာတော့ ဧကန်ပါ။ ကိုယ်က မသိစေချင်လို့ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ လူသိသွားတတ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းများ နေရာထိုင်ခင်း၊ ဌာန အပြောင်းအလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ယခုလမှာ (ထီဝါသနာအိုးများအတွက်) ထီပေါက်ကိန်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ထီပေါက်နိုင်တယ်။ (၂, ၃, ၄, ၇, ၀ ) ဂဏန်းများ အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။ ယခုလမှာ လူမှုဆက်ဆံရေး ကံဇာတာ ညံ့နေလို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အပေါင်းအသင်းများနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရင်း နဲ့ သားသမီးတွေကတောင် အတိုက်အခံပြု ဆန့်ကျင်တာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကိစ္စ ကံမကောင်းနိုင်သေးသလို ၊ အိမ်ထောင်ရှိသူများလည်း အိမ်ထောင်ရေးကံ ညံ့နေတတ်ပါတယ်။ ပညာသင်ကြားနေကြသူများ ပညာရေးကံ အနည်းငယ် ညံ့နေပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ချုခြာညံ့ဖျင်းတတ်ပြီး နာတာရှည် ရောဂါ အခံရှိသူများ ကျန်းမာရေး ဂရုပြုဖို့လိုပါတယ်။ အင်္ဂါနံ နဲ့ စက်ပစ္စည်းများ ၀င်ရောက်တတ်ပြီး ၀င်လျှင် ကောင်းပါတယ်။ လူမျိုးခြား ၊ ဘာသာခြား အကျိုးပြုကိန်း ရှိပါတယ်။ ယခုလအတွက် နာမည်မှာ - သောကြာစ,ပြီး အင်္ဂါ ၊ စနေ နံတွေနဲ့ ဆုံးထားသူများကတော့ ကံဇာတာ အကောင်းဘက်ကို ပိုများပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ ကြာသပတေးနံများနဲ့ ဆုံးထားသူများ ကံဇာတာ အညံ့များနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူး(ရာဟု) နံများနဲ့ ပိတ်ထားသူများ အညံ့အတော်များနိုင်လို့ အထူးဂရုပြုပါ။
ယတြာပြုလုပ်လိုသူများအတွက် - မူလတန်း ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ဗလာစာအုပ် ၊ ခဲတံ ၊ ဘောပင် အစရှိတဲ့ စာရေးကရိယာ များကို ဒါနပြုလုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် မိမိအိမ်က ဘုရားမှာ နာနတ်သီး နာနတ်ဖျော်ရည်များ ကပ်လှူပူဇော်လိုက်ပါ။
စနေသားသမီးများ ယခုလမှာ ကံဇာတာ အကောင်းအညံ့ ၊ အနိမ့်အမြင့်တွေ ရောထွေး နေမယ့် အနေအထား ရှိပါတယ်။ ငွေရေး ကြေးရေး ၊ စီးပွားရေးကံများမှာတော့ ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာ မရှိနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူလည်း သောကြာသားသမီးများလို နာမည်ပျက်ကိန်း ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လိင်ကိစ္စ အရှုတ်အထွေးများကြောင့် နာမည်ပျက်နိုင်သလို ၀န်ထမ်းများမှာ လာဘ်ငွေကိစ္စကြောင့် နာမည်ပျက်ကိန်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာ ကြီးမားစွာ တတ်ကိန်းရှိပါတယ်။ လင်ငယ် မယားငယ် ကိစ္စ များ တက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒီလအတွင်း စနေသားသမီးများ သက္ခတ်အညံ့ (အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ စနေ ၊ ကြာသပတေး) များအတွင်း ရောက်နေလျှင် အမှုအခင်းဖြစ်ကိန်း ရှိပါတယ်။ တရားဥပဒေကို ရင်ဆိုင်ရကိန်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း နဂိုက တည်းက မမှန်မကန် ပြုလုပ်ထားသူတွေ အတွက်ပါ။ မှန်ကန်စွာ အသက်မွေးသူများအတွက်တော့ မဟုတ်ပါ။ အိုးအိမ်အဆောက် အဦး နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပြီး အိမ်ဝယ်ရန် ကြံရွယ်ထားသူများ အထမြောက် တတ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ သက္ခတ်အတွင်း ရောက်နေသူ ၀န်ထမ်းများ ရာထူးတက်ကိန်း (၈၀)% လောက်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းလုပ်သူများ ဆိုရင်တော့ ၀င်ငွေကောင်း ၊ စီးပွားတက်မယ့် လ, တစ်လဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလမှာ စနေသားသမီးများ ပညာရေး ကံဇာတာ အနည်းငယ် နိမ့်ပါးနေတတ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲများတွင် ခြေချော်လက်ချော် ဖြစ်တတ်ဖွယ် ရှိလို့ အထူးသတိထား ဖြေဆိုပါ။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်မယ်လို့ ကြံရွယ်ထားမှုများ အထမမြောက်တတ်ပါ။ ယခုလအတွက် နာမည်မှာ - စနေ စ, ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့ ဆုံးသူများသာ ကံဇာတာ တိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်ပြီး ကျန်နေ့နံများ နဲ့ ပိတ်ထားသူအားလုံး ကံဇာတာ အညံ့ဖက်မှာ ရှိတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တနင်္လာ နဲ့ ကြာသပတေးနံများနဲ့ ပိတ်ထားသူများ အထူးသတိထားရန် လိုပါတယ်။ ယတြာပြုလုပ်လိုပါက - မင်းဂွတ်သီး (၇)လုံးကို ဘုရားမှာ ကပ်လှူပြီး တောင်းရမ်းစားသူတစ်ဦးဦးကို ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလိုက်ပါ။ ဒီလထဲမှာ ဒီအလှူကို (၃)ကြိမ် အနည်းဆုံး ပြုလုပ်ပေးပါ။ (ဒီ တစ်လလုံး ကိုယ်တိုင် မင်းဂွတ်သီး မစားရပါ)
ယခုလမှာ ရာဟုသားသမီးများအတွက် ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများနှင့်မခြား ကံဇာတာ တိုးတက်ကောင်းမွန်နေပါမယ်။ ဒီအပြင် ငွေရေး ကြေးရေး စီးပွားရေး ကိစ္စမှာ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများထက် ပိုမိုကံကောင်းနိုင်ပြီး ငွေကြေးစီးပွားများ သိသာစွာ တိုးတက်နိုင်တဲ့ လ, ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ၏ လုပ်ငန်း တိုးချဲ့မှုများမှ အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်များ ခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေး နဲ့ လိင်ကိစ္စ ရှုတ်ထွေးတတ်သူများအတွက် ဒီလထဲမှာ ဒီကိစ္စအတွက် “ခေါင်းအတော်ကိုက်” ရမယ့် လ, ဖြစ်ပြီး ဒီအတွက် ငွေကြေး များစွာလည်း ကုန်ကျတတ်ပါတယ်။ အဆင်မသင့်ရင် “လျှော်ကြေးငွေ” ပေးရတဲ့ အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ “မြေ၀င်ကိန်း” သော်၎င်း ၊ “မြေ” နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်သော်၎င်း ရရှိနိုင်မယ့် လ, ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရဖွယ် ရှိပြီး ဆောင်ရွက်လိုက်လျှင် ကောင်းကျိုးများ သိသာစွာ ခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိအိမ်သို့ ဘုရားစေတီ ရဟန္တာပုံတော် များရောက်ရှိ လာလျှင် အလွန်ကောင်းမွန်သော အတိတ်နိမိတ်ဖြစ်ပြီး “စုတ်ကြီး ၊ လာဘ်ကြီး” ၀င်မယ့် နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် “စုတ်” ကို အလေးပေးလိုက်ရင် “လာဘ်လာဘ” ဘက်မှာ ကျဆင်းသွားတတ်တာကို သတိပြုပါ) ။ ကျန်တာတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး များရဲ့ ကံဇာတာနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ ပညာရေးကံကျပြန်တော့လည်း ရာဟုနေ့ပိုင်းမှာ မွေးဖွားသူများဟာ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးထက် ပိုမိုကောင်းမွန်နေပြီး ဖြေဆိုမည့် စာမေးပွဲများကို အခက်အခဲမရှိ (မိမိကြိုးစားမှုအလျှောက်) ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဂုဏ်ထူးမှတ်များကို မျှော်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ယခုလအတွက် နာမည်မှာ - ဗုဒ္ဓဟူး(ရာဟု) စပြီး တနင်္လာ ၊ သောကြာ ပိတ်သူများသာ ကံဇာတာ အနည်းငယ်မျှ ကျဆင်းတတ်ပြီး ကျန်နေ့နံပိတ်သူ အားလုံး ကောင်းပါတယ်။
ယတြာပြုလုပ်လိုပါက - မိမိနေအိမ်ဘုရားမှာ ကံ့ကော်ပန်း နှင့် သီဟိုစေ့များကို မကြာခဏ ဆိုသလို ကပ်လှူပူဇော်ပေးပါ။
(၇)ရက် သားသမီးအားလုံး ကိုယ်ကျန်းမာခြင်း ၊ စိတ်ချမ်းသာခြင်းများဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	30 comments on “# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်”	zin on March 3, 2012 at 8:17 pm said:
Chit Nilar on March 4, 2012 at 12:07 am said:
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာအေးချမ်းပါစေ ဆရာ…
sadabawa on March 4, 2012 at 1:35 am said:
လာဖတ်သွားပါတယ် ဆရာ …
Nilar on March 4, 2012 at 2:32 am said:
ColinLynn on March 4, 2012 at 7:37 am said:
Dr.Tin Bo Bo on March 4, 2012 at 10:14 am said:
မအားတာထက်စာရင် ကျန်းမာရေး မကောင်းတာက ပိုများလို့ ဆောင်းပါးတွေ၊ အမေး/အဖြေတွေ ပျက်ကွက်နေရတာပါကွယ်။ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲ။
moe on March 4, 2012 at 10:51 am said:
စေတနာထားသောဆရာ ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတာ(Mitta)ပို့ သလိုက်ပါတယ်.. (apologies sayar, burmese double words, I dunno how to type.)
KN on March 4, 2012 at 8:47 pm said:
ကျေးဇူးပါ .. ဆရာ ကျန်းမာပါစေ
red rose on March 4, 2012 at 9:45 pm said:
လာဖတ်သွားပါတယ်ဆရာ..ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ကြားထဲက တင်ပေးတဲ့အတွက်..ကျေးဇူးပါဆရာ..ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ..ဆရာ နေကောင်းပါစေ..
rose on March 5, 2012 at 9:46 am said:
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ
May Thaw on March 5, 2012 at 10:15 am said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါဆရာ။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ အစစအရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါစေဆရာ
khinkhinmoe on March 5, 2012 at 11:37 am said:
tskyi on March 6, 2012 at 3:42 pm said:
zin on March 10, 2012 at 7:46 pm said:
အဲနေ့ကျမေ့နေမှာစိုးလို့ခုကတည်းက happy birthday ဆရာရေ..
michelle yeoh နဲ့ဆရာနဲ့မွေးတဲ့ခုနှစ်အတူတူပဲနော်.. the lady ကြည့်ရင်းနဲ့သတိထားမိလို့ပါ…ဆရာကျန်းမာပါစေ
ငြိမ်း on March 11, 2012 at 4:29 am said:
ကိုယ်တိုင်လည်းနေမကောင်းတော့ အလုပ်ကြွေးတွေတစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့ ဘဝကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ မြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ နေမကောင်းတဲ့လူကို အလုပ်ထပ်ပေးသလိုဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခုလောက်တော့ဖြေပေးပါဆရာရယ်။ အမေ့ခံတွေ ဘယ်တော့လွတ်မလဲ။ နာမည်မကြီးဘဲ အပြစ်ကင်းတဲ့သူတွေ အများကြီးကျန်သေးတယ်လေ။ ကိုယ်တိုင်မတွက်ဘဲ စေတနာနဲ့တွက်ပေးတဲ့သူတွေကို အပြစ်လိုက်ဖို့နေတဲ့သူတွေကိုတော့ ဂရုကိုမစိုက်ပါနဲ့ ဆရာရေ။ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာစွာနဲ့ သံသရာလွတ်ကြောင်းတရားအားထုတ်နိုင်ပါစေ။
မိုး on March 12, 2012 at 4:03 pm said:
ဆရာ … ဒီလင့်ခ်လေးက comment လေးတွေလဲဖြေပေးပါဦးနော် .. နေမကောင်းတဲ့ကြားကမေးရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်… ဆရာ့ကိုဘဲမေးစရာရှိလို့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
nn on March 13, 2012 at 11:20 am said:
10.2.2012 ကို Reply မတွေ့သေးပါ ကျေးဇ
ဦးထေရိန်ဒ on March 15, 2012 at 4:36 pm said:
ဆရာုကီးဒေါက်တာရေ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးပါတ်လောက် ဆရာုကီးထံမေးခွန်း
တွေပို.ထားပါတယ် ဒကာုကီးရဲ.အဖြေကိုစောင့်နေတယ် ဘုန်ုးကီးမှာ
ကိုရင် မောင်အောင်ကျော်ကို ဘုန်ုးကီးလဲလဲပါးပါးတတ်ထားတဲ့ဗေဒင်
ကို မောင်အောင်ကျော်အားသင်ုကားပေးမလို.ပါ ဒါပေမဲ့သူအတွက်
ကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူး။အကျိုးရှိမရှိ သိလိုတယ် တွက်ချက်ပေးပါဒကာ
ရေ သူရဲ့မွေးခုနှစ်မှာ၁၉၉၅.၁၂.၁၈ ဖြစ်ပတယ် ဗေဒင်နဲ.သူနဲ.
အကျိုးပေးမပေးသိချင်တယ်ဆ၇ာရေ ဘုန်ုးကီးလဲ ရန်ကုန်က
ဆရာုကီးဦးမောင်မောင်သန်း-ရင်ကိုအေးမြစေသားထံ အင်ဂ၀ိဇာပညာကို နဲနဲပါးပါးသင်ယူခဲ့ရာကနေ သူကိုပြန်သင်ပေးမလို့
ပါ ရေလြီမြို.ဟောင်း အနောက်ကျောင်း ဦးထေရိန်ဒပါ
ANTHONY on March 16, 2012 at 2:28 am said:
ဆရာကျန်မာရေး အမြဲကောင်းနိူင်အောင် ဆုတောင်းကူညီပေးလျှက်ပါနော်……..ကျန်မာပါစေ……..ဆရာ
Hnin Hnin Htay on March 16, 2012 at 2:45 pm said:
loi on March 18, 2012 at 8:58 am said:
Dr.Tin Bo Bo on March 18, 2012 at 9:14 am said:
ဆရာတော်ဘုရား။ သူ့ရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်အရပြောရရင် ဗေဒင်ပညာကို သင်ရင်တော့ တတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်မွေးရလောက်တဲ့ ကံဇာတာမျိုးတော့ မတွေ့ရပါဘူး။ တတ်သင့်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ သင်ရင်တော့ ရပါတယ်။ ပညာနဲ့ အသက်မွေးရင်တော့ အောင်မြင်ဖွယ် မရှိဘူးလို့တွေ့ရပါတယ် ဘုရား။
Dr.Tin Bo Bo on March 18, 2012 at 9:16 am said:
ဟုတ်တယ်။ ကြောက်မှာ စိုးလို့ ထည့်မရေးလိုက်တာ။ ဒီလထဲမှာ စနေသားသမီးတွေ မဟာဘုတ်ခွင်မှာ “ပက္ခတ်” မိနေတယ်။ ဒီလထဲမှာ စနေသားသမီး နဲ့ ကြာသပတေးသားသမီးတွေ အညံ့ဆုံးဘဲ။
aye on March 19, 2012 at 4:55 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on March 19, 2012 at 9:08 pm said:
ဒီလို ရှားရှားပါးပါး နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အတွက် ရင်ထဲက ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ (အခမဲ့ စေတနာနဲ့ ဖြေပေးနေတဲ့ကြားက သူတို့မေးတာ မြန်မြန်ဖြေမပေးရကောင်းလားဆိုပြီး ရန်တွေ့ထားတဲ့ သူတွေရဲ့ ကွန်းမန့်တွေကိုတော့ စိတ်မချမ်းသာလို့ ဖျက်ပစ်ထားရတယ်)။ ကျေးဇူးပါဘဲကွယ်။
memehtunlwin on March 29, 2012 at 8:21 am said:
ွှ့Thandar on March 29, 2012 at 8:28 am said:
MYO MYINT TUN on March 29, 2012 at 8:36 am said:
Dr.Tin Bo Bo on March 31, 2012 at 11:29 am said:
ဒီပို့စ် အောက်မှာ ဗေဒင်ဟောမပေးဘူးနော်။ မေးချင်ရင် “၂၀၁၂ ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင်ဟောကိန်းများ” ပို့စ် အောက်မှာဘဲ မေးလို့ရမယ်။
Than Than Soe on May 4, 2012 at 12:56 pm said:
ကျမ ရဲ့ အိမ်ကို ရောင်းထွက်ချင်လို့ ကူညီပါအုံးဆရာ။ ဘယ်လမှာ ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေလို့ ယတြာရှိရင်လည်း ညွှန်ပေးပါနော်။
ဟူးရား ဂဏန်း= 1
မွေးနေံ = 24.1.19.64 (သောကြာ)
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,896)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,999)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,954)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,433)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,477)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,604)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,629)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,995)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,320)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,277)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,115)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,060)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,857)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,820)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,305)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,146)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,839)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,512)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,204)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,187)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,696)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,686)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,556)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,271)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,254)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,923)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,717)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,484)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,037)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !